Afar Geesood oo aan la daboolin ayaa lagu sharfay abuuritaanka isbeddel togan oo ka dhex dhaca bulshada guud ahaan Minnesota
Afar reer Minnesota ah ayaa loo aqoonsan yahay waxqabadkooda muuqda, inta badan aan la aqoonsaneyn ee ku saabsan tayada nolosheena sare ee gobolka sida kuwa qaata abaalmarinta 2020 Virginia McKnight Binger Unsung Hero Award oo ka socota Golaha Minnesota ee Macaamilka (MCN) iyo Mu'asasada McKnight.
Patti Ballan (Rainer), Lisa Bellanger (Minneapolis), Desralynn Cole (Minneapolis), iyo Hani Jacobson (Saint Cloud) waa geesiyaal aan laga fiirsan bulshadayada. Laga soo bilaabo sinaanta daryeelka caafimaadka ilaa helitaanka tikniyoolajiyadda ee barashada fog, geesiyaashani waxay naftooda u hibeeyeen jiilkeenna hadda jira iyo jiilalka soo socda si qof walba uu u kobco xilliyadan aan horay loo arag.
In kasta oo markii hore la iska indhatiray, Abaalmarinta Xiddigaha Gacanta ee Virginia McKnight waxay aqoonsan tahay in shaqadooda aan la qiimeynin. Abaalmarinta qaatayaasha abaalmarinta ee bulshada waxaa ka mid ah:
Halkii loo oggolaan lahaa dhisme kale inuu bannaanaado, Patti Ballan waxay u beddeshay meheraddii duugga ahayd ee aabbeheed meherad wada shaqeyn oo siisa internet xawaare sare ku socda magaaladan yar.
Lisa Bellanger ayaa ilaalinaysa abtirsiinta asalka ah iyadoo ka faaideysaneysa farxada, xanuunka, iyo dhaqanka aabayaasheeda Ojibwe iyo Dakota barashada jiilka soo socda.
Marka dukaamadu xirmaan inta lagu gudajiray kacdoon shacab xagaagan, Desralynn Cole waxay lashaqeeyeen Soo-Bixinta Kheyraadka Degdegga ah ee Northside si loo hubiyo in deggeneyaashu wali helayaan baahiyaha jira.
Hani Jacobson u dooda muhaajiriinta iyo qoysaska midabka leh, aqoonsashada carqaladaha daryeelka caafimaadka iyo ka shaqeynta sidii looga takhalusi lahaa Kooxda Hawl-wadeenada Bulshada ee COVID-19.
"Inkasta oo bulshooyinkeennu ay la kulmeen caqabado aan horay loo arag sanadkan inta udhaxeysa COVID-19 iyo rabshadaha sii socda ee ka dhanka ah meydadka Madoow, geesiyaalkan aan la soo koobi karin ayaa u istaagay sidii loo hubin lahaa taageerada, daryeelka, iyo kheyraadka ku baahsan gobolkeena," ayuu yiri Nonoko Sato, oo ah Agaasime kuxigeenka MCN. “Way cadahay intii lagu jiray howsha magacaabista sida loo ixtiraamo, kaliya maahan magacaabistooda, laakiin bulshada ay shaqsi ahaan taabteen.
Sannadkan, waxaa si gaar ah muhiim u ah in loo dabbaaldego xubnaha bulshada ee ka shaqeeya u adeegidda dadka kale. In kasta oo shaqadoodii mar hore la iska indhatiray, haddana abaalmarintan waxay aqoonsan tahay in tabarucaadkooda la qiimeeyo, la arko, lana sharfo. ”
Laga soo bilaabo 1985, afar qof ayaa sanadkiiba la siiyaa abaalmarinta 'Virginia McKnight Binger Unsung Hero Award' shaqadooda noloshooda wax ka badasha, labo ka socota Greater Minnesota iyo laba metro metro metro. Sannad kasta 2020 honoree wuxuu helayaa abaalmarin lacageed oo ah $10,000 oo laga helo Machadka McKnight Foundation, muuqaal muuqaal ah oo laga helo sheeko-yaqaannada aan macaash doonka ahayn ee 'Pollen', iyo aqoonsi laga helo Shirka Sannadlaha ah ee MCN ee 2020 ee Khamiista, Diseembar 10, 2020.
Ku saabsan 2020 Virginia McKnight Binger Unsung Hero Award qaatayaasha:
Patti waxay haysay meherada aabbaheed meheraddeeda muddo ku dhow 25 sano, laakiin markii la gaadhay xilligeedii hawlgabnimada, waxaa jiray xaalad cakiran: ma aysan doonayn inay ka tagto dhisme kale oo madhan oo ku yaal magaaladeeda yar. Odaygeeda oo ay weheliyaan, waxay u beddeleen bakhaarka alaabta guriga meel la wada shaqeeyo. In kasta oo ganacsiyada sidan oo kale ah aan lagu baran meelaha miyiga ah, haddana Patti waxay aragtay fursad ay ku siiso wax cusub beesheeda. "Waxaan ku heysanaa adeegga intarnetka ee liita meelaha ka baxsan iyo meelaha loo dalxiis tago, marka waxaan keenay internet xawaare sare leh oo la isku halleyn karo oo dhaqso badan," ayay tiri. In kasta oo COVID-19 ay beddeshay qorshayaasheeda, haddana dib uma dhigin iyada. Laga bilaabo Maarso, Patti waxay bilawday inay siiso boos bilaash ah ardayda aan ka soo gali karin fasalada qadka ee guriga. In kasta oo ay dhaafayso fursadaha dakhliga, haddana waxay sii wadaysaa inay u oggolaato kuwa aan macaash doonka ahayn iyo ardayda inay u isticmaalaan booska shirarka iyo helitaanka internetka, lacag la'aan.
Abaabulaha bulshada ee xiisaha leh, Lisa waxay u heellan tahay ilaalinta dhaqanka Asaliga ah iyo la wadaagida jiilka soo socda. "Waxaan doonayay inaan caruurteyda ka kaxeeyo magaalada, kana saaro culeyska ay leeyihiin, si aan ula soo kulmo nooc khibrad dhaqameed ah - ha ahaato budo ama dawooyin soo qaadis ama doon yar," ayay tiri. Muddo sanado ah, Lisa waxay ka shaqeyneysay guud ahaan beesheeda, iyadoo si iskeed ah u bixineysa dhaqamo dhaqameedyo, caadooyin, iyo dhaqammo aasaska Hindida Mareykanka, si iskaa wax u qabso ah u siineysa inay ku bixiso dhaqamada dhaqameed ee isbitaalada, iyo ka caawinta haweenka Hindida ah ee ku xiran xabsiyada taageero iyo ilo. Xagaagan, markii kacdoonnadii ay gaareen heerkii ugu sarreeyay iyadoo laga jawaabayo dilkii George Floyd, waxay la shaqeysay Dhaqdhaqaaqa Hindida Mareykanka si loo abuuro kormeero bulshada ka caawiya ilaalinta ganacsiyada Hindida Mareykanka. Shaqada Lisa waxay kobcisaa dareenka bulshada oo leh qofkasta oo ku lug leh waxayna dhiiri galisay xiriiro qoto dheer, macno leh oo udhaxeeya deriska iyo ganacsatada si isku mid ah.
Desralynn waa habar is sheegta oo ku taal waqooyiga Minneapolis, halkaas oo ay ku soo kortay kuna soo noqotay ka dib markay ka qalin jabisay jaamacada Fisk University. “Waqooyiga Minneapolis waxay leedahay taariikh aad u hodan ah. Waa meel aan caadi aheyn oo lagu noolaado, ayay tiri. Waxaan haystaa fursad aan ku soo bandhigo taas, si aan u sii xoojiyo. ” Dibadbaxyadii kadambeeyay ee lagu dalbanayay in cadaalad loo sameeyo George Floyd xagaagan, dad badan oo degan Waqooyiga Minneapolis ayaa is arkay iyaga oo aan helin raashinka iyo waxyaabaha aasaasiga u ah. Iyada oo la shaqeyneysa Kheyraadka Degdegga ah ee 'Northside Resource Pop Up', Desralynn waxay isku dubariday in ka badan 150 mutadawiciin ah oo cunto iyo agab u qaybiyey 8,000 oo qof oo ku baahsan beesheeda. Waxay aniga ii aheyd shaqsi maxaa yeelay waxaan heli karaa ilo, laakiin waxaa jira dad aan awoodin. Haddaynu basaska xidhi doonana waxaan ka baqeynaa rabshado yar oo sokeeye, markaa waxaan ku dhaqaaqi doonaa waddo u socota xitaa garoonka ciyaarta. ”
Hani waxay hooyadeed ka soo baratay farshaxanka daryeelida iyadoo yar, maadaama ay laba sano oo yaraanteedii ku soo qaateen xeryaha qaxootiga ee Kenya. Markii ay u guurtay Mareykanka, Hani waxay noqotay kalkaaliso caafimaad oo diiwaangashan tan iyo markaasna waxay u doodeysay muhaajiriinta iyo qoysaska midabka leh, aqoonsashada caqabadaha daryeelka caafimaadka iyo ka shaqeynta sidii loo baabi’in lahaa. Markii masiibada ay bilaabatay inay ku dhufato dalka, way garatay cidda halista ugu badan ugu jiri karta. Waxay ku biirtay kooxda bulshada Soomaaliyeed ee COVID-19 Task Force, iyadoo ka soo muuqaneysa raadiyaha Soomaaliya, iyadoo u kaxeysa goobo ganacsi oo kala duwan si ay u turjunto borotokoollada nabadgelyada, iyo u lugeynta guri-ka-guri, qaybsanaanta waji-furka iyo ku wargalinta dadka halista. “Waxbarashada iyo caafimaadka, waa xiriir. Waa helitaan la'aan iyo faham la'aanta sida loo maro nidaamyadan. Waalidiinta ayaa wajahaya guryo la'aan iyo cunno yari, intaasna waxa u dheer, waxay u dagaallamayaan caafimaadkooda, ayay tiri.
Ka eeg faahfaahin dheeraad ah qof kasta oo abaalmarin qaata waxaa qoray Pollen Midwest.
Ku saabsan Golaha Minnesota ee aan macaash doonka ahayn
MCN waxaa la aasaasey sanadkii 1987 si loo buuxiyo baahida sii kordheysa ee macluumaadka ee ururada aan macaash doonka aheyn iyo in la isugu yimaado ururada aan macaash doonka aheyn si wax looga qabto arrimaha wajahaya waaxda. Iyadoo ay ka badan yihiin 2,200 ururada xubnaha ka ah ururada aan macaash doonka ahayn, waa ururka labaad ee ugu weyn gobolka ee ururada aan macaash doonka aheyn ee Mareykanka, oo leh ujeedo ah inay ku wargeliso, kor u qaado, isku xirto, iyo xoojiso shaqsiyaadka aan macaash doonka aheyn iyo qeybta aan macaash doonka aheyn.
By Kim Anderson Luulyo 2021